Doodii Macalimu ee Shalay “Baroortu Orgiga Ka Weyn” - Latest News Updates
Doodii Macalimu ee Shalay “Baroortu Orgiga Ka Weyn”
Sanado badan waxaa ka dhex jiray suxufiyiinta Soomaaliyeed kala qaybsanaan baahsan iyagoona samaystay laba Urur oo kala matala, garab hoos yimaada Cumar Faruuq, iyo garabka hoos yimaada Macalimu. Labada urur ayaa ku kala adkaaday saaxada caalamka iyo shirarka heer caalami iyo heer goboleed, garabka uu hogaamiyo Macalimu ayaa ahaa garab taageero balaaran ku haystay magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka.
Macalimu shirkiisii jara’id ee shalay wuxuu xanaaq kala dul dhacay dowlada Federaalka, isagoona uga gol lahaa ajande ka duwan midka uu ka hadlayey, waana markii ugu horaysay oo dhaliil intaas le’eg u soo jeediyo dowlada. Macalimu ayaa ka hadlay saxafi Nuur Ismaaciil Sheikh oo loo xiray waxyaalo uu ku soo qoray facebookiisa, mana ahan markii ugu horeysay oo la xiro wariyayaal intii uu xilka hayey Macalimu.
Waxaan jeclaystay inaan halkaan ku soo koobo dhowr qodob oo u ka dhawaajiyey Gudoomiye Macalimu.
Dhaliishii Dowladda ee Xiriirka Saxafiiyiinta
Dowladu waa ku khasban tahay inay yeelato saxafiiyiin baahiyaha horumarkeeda maahan arin ugub ah, waxaana la inkiri karin inay jiraan warbaahino si toos ah u taageera mucaaradka oo maalin iyo habeenba soo daaya dal-daloolada ay leedahay dowladu. Maxaa u diidaya in dowladu dhaqaale ku bixiso sidii loo difaaci lahaa hadiiba ay jirto dhaqaale lagu bixinayo abuurida dacaayado ka dhan ah wax qabadkeeda?
Telefishinka Fox News ee laga leeyahay dalka Maraykana waxaa uu si indho la’aan ah u taageeraa siyaasada Madaxweyne Trump, waxaana dowladu ku bixisaa dhaqaalo faro badan si looga difaaco Telefishionka afka dheer ee CNN. Waxaa kale oo jira Telefishino magac ku leh dalkeena oo qandaraasyo soconayey sanado badan la galay maamulkii Dowlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia, iyagoona waligood soo qaadi tacdiyadii ka dhacayey deegaankaas, balse ay maalin iyo habeen tabinayey siyaasada Madaxweyne Cabdi Ileey.
Qoraalkii Macalimu uu ku dhaliilay Wasiir Xoosh
Macalimu ayaa qoraal aad u dheer soo dhigay bartiisa facebook wuxuuna aad u dhaliilay Wasiirka Dastuurka Cabdi Xoosh, dhaliisha ayaa daarnayd in Wasiirku ku marti qaaday shirka dad nolosha ka dhacay iyo qurba joog aan wax badan kala socon xaalka dalku marayo. Balse aragtidayda ayaa ah inuu Macalimu aad uga xumaaday ka qaybgalka Cumar Faaruq ee shirkaas madaama ay ka dhaxayso hardan loogu jiro kasbashada saxaafada Soomaaliya.
Wasiirka Dastuurka Cabdi Xoosh Jibriil ayaa ku marti qaaday Gudoomiyaha NUSOJ garabka Cumar Faaruuq shirkii dastuurka oo looga hadlayey xuquuqaha ay dastuurka ku leeyihiin dadka jilicsan sida Naafada iyo Barakacayasha, ka qayb galka Cumar Faaruq waxay u ahayd Wasiirka Dastuurka guul weyn madaama uu ku xiran yahay Xooghayaha NUSOJ Hay’ado Caalami ah oo iyagu danaynaya inay arkaan doorka ay ku leeyihiin dastuurka dadka jilicsan.
Xoriyatul Qowlka Saxaafadda Soomaalida
Xoriyatul qowlka qofka waxaa siiyey dastuurkeena, waana lagama maarmaan in lagu tixgaliyo, balse saxafiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ma u bisil yihiin xoriyatul Qowl aan ku xadgubayn danta guud iyo sharafta shakhsiga, mase yaqaanaan in ay soo jeediyaan dhaliil cilmiyeeysan taas oo ka maran caadifad iyo qabyaalad.
Horaantii sanadkii 2013-ka ayaa anigoo ahaa Agaasimaha Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa wiil u shaqaynayey Idaacad la oran jiray Sahan oo hada hawada kabaxday ayaa habeen barnaamij dhan igu soo qaatay, waxyaalaha uu igu dhaliilayey waxaa ka mid ahaa:
· Inaan Madaxweyne Abdiraxmaan Faroole 2011-kii aan kala soo baxsaday lacag gaaraysa 100,000 dollar.
· Inaan shirqoolo aan ku khaarajinayo Ra’iisul Wasaare Saacid aan diyaarinayey
· Inaan la shaqaynayey kooxo ka soo horjeeda horumarka dalka
· Iyo waxyaalo badan oo aa mudnayn inaan halkaan ka sheego
Waxaan dacwad u gudbiyey Ururkii Saxfiyiinta Qaranka, waxayna weydiiyeen sababta ku kaliftay inuu ilaa heerkaas igu xadgubo, wuxuuse wiilkii saxafiga ahaa si fudud u yiri “Ninkaas wuxuu naga reebay liiska saxaafada lagu casuumo shirarka Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Wax kasta oo aan ka sheegayna waa arin aan kaga aargoosanayey” Ayuu yiri
Marka saxaafada qaarkeed waa kuwo noocaas u shaqeeya, oo aan kala aqoonin qadafka ay u gaysanayan muwaadinka iyo duminta dalka, sidaas daraadeed dowladu waxay ku khasban tahay inay ilaaliso danta guud cid walba oo bulshada ku faafinaysa waxyaalo aan munaasab ahayn gacan bir ah ku qabto.
W/Q Diraac Salaad Fagaase